Imfazwe yoLwandle lweCoral kwiMfazwe yehlabathi II
Imbali kunye neNkcubeko IMfazwe Yehlabathi II
Imfazwe yaseLwandle lweCoral yalwa neMeyi 4-8, 1942, ngexesha leMfazwe Yehlabathi II (1939-1945) njengoko ii-Allies zifuna ukumisa ukuthunjwa kweJapan kweNew Guinea. Ngethuba leenyanga zokuqala zeMfazwe Yehlabathi ePacific, amaJapan aphumelela ukunqoba kwezinto ezintle ezazibona zithatha iSingapore , zithintele iinqanawa zakwa-Allied kwiLwandle lweJava , zixhobisa amabutho aseMerika namaPhilippines kwi- Peninsula yaseBataan ukuzinikela .
Ukunyuka ngasemazantsi nge-Dutch East Indies, i-Imperial Japanese Naval General Staff ekuqaleni yayifisa ukukhusela ukuhlasela kwe-Australia ekumntwini ukukhusela elo lizwe ukuba lisetyenziswe njengesiseko.
Esi sicwangciso sachithwa yi-Imperial Japanese Army eyayingenalo igunya kunye nokuthunyelwa kwamandla okugcina ezo zinto. Ukukhusela iJapan yaseJapan, i-Vice Admiral Shigeyoshi Inoue, umlawuli we-Fourth Fleet, ukhuthaze ukuthatha lonke iNew Guinea kunye nokuhlala eSolomon Islands. Oku kuya kuphelisa isiseko sokugqibela se-Allied phakathi kweJapan ne-Australia kunye nokubonelela nge-perimeter yezokuphepha ngokusingqongileyo kweJapan kwangoko ku-Dutch East. Esi sicwangciso savunywa njengoko sasiza kuzisa neentlabathi zase-Australia phakathi kweembombo zeJapan kunye kwaye siza kunika ukuxhoma kwiindawo zokusebenza ngokumelene neFiji, iSamoa kunye neNew Caledonia. Ukuwa kwezi ziqithi kuya kuhamba ngokugqithiseleyo imizila yokunxibelelana ne-United States.
I-Operated Mo yaseDubbed, icebo laseJapane lalibiza iiplanethi ezintathu zaseJapan eziphuma eRabaul ngo-Ephreli 1942. Ookuqala, oholwa ngu-Admiral Kiyohide Shima, wayenomsebenzi wokuthatha iTulagi kwiSolomons kunye nokuseka isiseko se-seaplane kwisiqithi. Olulandelayo, elawulwa yi-Admiral Koso Abe yangemuva, liqulethwe ngamagunya okuhlasela abaza kubetha isiseko esisisiseko se-Allied baseNew Guinea, ePort Moresby.
Le mikhosi yahlaselwa yi-Vice Admiral Takeo Takagi yamagumbi okugubungela abantu abathwala i- Shokaku kunye neZuikaku kunye ne- lighthoight Shoho . Ukufika eTulagi ngo-Meyi 3, amabutho aseJapan ahlala ngokukhawuleza esi siqithi aze amise isiseko se-seaplane.
Kuyo yonke intwasahlobo ka-1942, ii-Allies zahlala zisazi malunga ne-Operation Mo kunye neenjongo zaseJapan ngokusebenzisa i-radio intercepts. Oku kwenzeka ngokubanzi ngenxa yezixhobo zokubhaliweyo zaseMerika eziphula i-JN-25B yaseJapan. Uhlalutyo lwemiyalezo yaseJapan lukhokele ulawulo lobambiswano olugqityiweyo ukugqiba ukuba inkohlakalo enkulu yaseJapane yayiza kwenzeka kwiSouthwest Pacific kwiiveki zakuqala zikaMeyi kwaye iPort Moresby yayijoliswe kuyo.
Ukuphendula kulo mngcipheko, u- Admiral Chester Nimitz , uMlawuli oyiNtloko ye-US Pacific Fleet, wayala onke amaqela amane aphetheyo kuloo ndawo. Ezi zibandakanya amaQumrhu okuSebenza 17 no-11, axhomekeke kubathwali be- USS Yorktown (iCV-5) kunye ne- USS Lexington (iCV-2) ngokulandelanayo, okwakuseseMzantsi Pacific. I-Vice Admiral UWilliam F. Halsey's Task Force 16, kunye nabathwali be- USS Enterprise (CV-6) kunye ne- USS Hornet (iCV-8), eyayisandule ukubuyela ePearl Harbour ukusuka kwi- Doolittle Raid , yalelwe kwakhona ngasezantsi kodwa ayiyi kufika ixesha lokulwa.
IFleets & Commanders
I-Admiral yangaphambili uFrank J. Fletcher
2 abathwali, abahamba nge-9, abatshabalali abangama-13
I-Vice Admiral Takeo Takagi
I-Vice Admiral Shigeyoshi Inoue
2 abathwali, abathinteli abahamba phambili, abahamba nge-9, abatshabalali abayi-15
I-Admiral yangemuva iFrank J. Fletcher, iYorktown kunye ne-TF17 yaqhubela kwindawo leyo yaza yaqalisa ukubetha kweTulagi ngo-Meyi 4, 1942. Ukubetha isiqithi esiqithi, kwayonakalisa kakubi isiqwenga se-seaplane kwaye kwasusa amandla okubonga ukulwa. Ukongeza, i- airtown yaseYorktown yancenga umonakalisi kunye neenqanawa ezihlanu zorhwebo. Ukuhamba ngezantsi, iYorktown yajoyina iLexington kamva ngaloo mini. Kwiintsuku ezimbini kamva, i-ase- B-17 yase-Australia evela kwi-Australia yabonwa kwaye yahlasela i-Port Moresby. Ukuqhubhisa ibhomu ukusuka kwindawo ephakamileyo, abazange baphume amanqaku.
Kuyo yonke imini, amaqela athatha amaqela athungatha angenanto injengeenkwenkwezi ezibonakalayo ezincinci ukubonakala.
Ngobusuku behleli, uFletcher wenza isigqibo esinzima sokuqhayisa amandla akhe aphezulu abathandathu abahambahambayo kunye nabahamba nabo. Umsebenzi otyunjweyo wama-44, phantsi komyalelo we-Admiral John Crace, u-Fletcher wabayalele ukuba bavimbele inkambo ebonakalayo ye-Port Moresby. Ukuhamba ngaphandle kwengubo yomoya, iinqanawa zaseCrace ziza kuba sezingciphekweni zentlanzi zomoya zaseJapan. Ngomso olandelayo, amaqela amabini aphetheyo aphinda aphande.
Khangela elinye i-Flattop
Ngoxa bengayifumananga nomzimba omkhulu, bafumana iiyunithi ezizimbini. Oku kwabona ukuhlaselwa kweenqwelo zeJapan kunye nokucima umonakalisi we-USS Sims kunye nokukhubazeka kwe-oil USS Neosho . Inqwelo yaseMerika yayingenakudlula njengoko ihlala eShoho . Efunyenwe kunye nenxalenye yeqela leenqwelo zeenqwelo ezantsi ngaphantsi, umphathisi-nto wayekhuseleka ngokukhawuleza kumaqela aomoya adibeneyo abathwala ababini baseMerika. Ulayishwe nguMlawuli uWilliam B. Ault, indiza yeLexington yavula ukuhlaselwa kungekudala emva kwe-11: 00 AM kwaye yafumana ukuxabana neebhomu ezimbini kunye neentsimbi ezinhlanu. Ukuvutha kunye nokuqhelana nokuma , uShoho wagqitywa yi- Yorktown . Ukucima kweShoho kwakhokela uLieutenant Commander uMnuz E. E. Dixon waseLexington kwingqungquthela ibinzana elidumileyo elithi "qhafaza enye indawo."
Ngomhla ka-8 kuMeyi, iiplani zengxowankulu ukusuka kwinqwelo nganye zafumana intshaba malunga ne-8: 20 AM. Ngenxa yoko, ukubetha kwaqaliswa ngamacala omabini phakathi kwe-9: 15 AM ne-9: 25 AM. Ukufika kwamagunya aseTagagi, i-airtown yaseYorktown , ekhokelwa nguLieutenant Commander uWilliam O. Burch, waqala ukuhlasela iShokaku ngo-10: 57. Efihliweyo kwi-squall eseduze, u- Zuikaku wasinda.
Ukubetha i- Shokaku kunye ne-1000 lb ibhomu, amadoda akwaBurch abangela umonakalo omkhulu ngaphambi kokuhamba. Ukufika kwendawo ngo-11: 30 ekuseni, iiplanethi zikaLexington zafika enye ibhomu ebetha kwi-carrier. Ayikwazi ukwenza imisebenzi yokulwa, uKaputeni Takatsugu Jojima wathola imvume yokurhoxisa umkhombe wakhe kuloo ndawo.
IJapan ihlaya emva
Ngelixa abaqhubi be-US bephumelela, iinqwelo zaseJapan zazisondela kubathwali baseMerika. Ezi zifunyenwe yi- Lexington CXAM-1 radar kunye nabagadi be- F4F bezilwanyana zasendle babethelwe ukuba bafumane. Ngoxa ezinye zeenqwelo zeentshaba zahlaselwa, ezininzi zaqala ukusebenza kwiYorktown naseLexington kungekudala emva kwe-11: 00. Ukuhlaselwa kwe-torpedo yaseJapan kumntu owayekade ehlulekile, ngeli xesha lo mva wancinciza ama-hits amabili ngohlobo lwe-91 torpedoes. Ezi zihlaselo zalandelwa ukuhlaselwa kwamabhoksi ahlasele iYorktown kunye ezimbini kwiLexington . Ukulimala kwamagosa okugijimayo ukusindisa iLexington kwaye waphumelela ekubuyiseleni umphathiswa kwiimeko zokusebenza.
Njengoko le migudu yayigqityiwe, intshukumo yombane wombane yatshisa umlilo owabangela ukuba kuqhutywe iziqhumane ezinxulumene nophethiloli. Ngethuba elifutshane, umlilo ophumela ekubeni awuzange ulawuleke. Ngabasebenzi abakwazi ukucima amalangabi, uKaputeni Frederick C. Sherman wayala uLexington ukuba ashiye. Emva kokuba abasebenzi baxoshwe, umonakalisi wase-USS Phelps waphonsa ama-torpedoes ezintlanu kwisithinteli esivuthayo ukukhusela ukubanjwa kwayo. Ivinjiwe ekuhambeni kwawo kwaye kunye ne-Crace's force endaweni, umlawuli jikelele waseJapane, i-Vice Admiral Shigeyoshi Inoue, wayala ukuba amandla okuhlasela abuyele echwebeni.
Ukunqoba kweqhinga, i-Battle of the Coral Sea ixabisa uFletcher umphathi weLexington , kunye nombhubhisi uSims kunye ne-oiler Neosho . Iyonke yabulawa yimikhosi yama-Allied yayingama-543. KwiJapan, ukulahlekelwa kwemfazwe kwakuquka uShoho , umonakalisi omnye, kunye nama-1,074 abulawe. Ukongeza, iShokaku yayonakaliswe kakubi kwaye iqela lakwaZuikaku liyancitshiswa kakhulu. Ngenxa yoko, bobabini baphoswa iMpi yaseMidway ekuqaleni kukaJuni. Ngoxa iYorktown yayonakaliswe, yakhawuleza yalungiswa ePearl Harbour yaza yajika yaya elwandle yaya kunceda ukunqoba amaJapan.
Imfazwe Yehlabathi I: USS Utah (BB-31)
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseGrisi
I-Bataan Ukufa ngoMatshi
Imfazwe Yehlabathi II EYurophu: Ukulwa eMntla Afrika, eSicily, nase-Italy
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseTarawa
I-Scandal ephezulu kunye nePatty Smyth Solo Iingoma zee-80s
Uluhlu lwabaseTyhini abaneeNobuliso zoxolo eNobel
Isikhokelo seSigxina esiPhambili samaHindu
Yintoni iGorilla Glass?
Ishedyuli kaJulayi eRodeo
Indlela Yokufumana Nokulungisa I-Leak In Pool Yakho Yokubhukuda
Incwadi Yothando KaBeethoven - Othandekayo Kwangunaphakade
IQela leLizwe lase-Oakmont: I-Historic, i-Major Championship Golf Course
Indlela yokuseka iSitishi se-computer ye-Ergonomic